Imisebenzi yobugcisa engama-20 enemiqolo yephepha lokuqala | Imisebenzi yezandla
Imisebenzi yezandla enamaphepha aqengqelekayo
Elizabeth Catalan | | Imisebenzi yeekhadibhodi
Ngubani owaziyo ukuba ngephepha elilula unokwenza izinto ezininzi kangaka? Ngomncono wentelekelelo kunye nezinye izinto osele unazo ekhaya, ungabafundisa abantwana ngenye imvakwemini ukuba bazenze njani ezi zinto Imisebenzi yobugcisa bephepha abaya kuthi ngayo badubule.
1 Amagorha amakhulu enziwe ngekhadibhodi
2 Amakhosazana ekhadibhodi
3 Inqaba elula enephepha lephepha langasese
4 Unodoli wezinja okanye ezinye izilwanyana zokwenza nabantwana
5 Iibinoculars zokuzonwabisa ngakumbi
7 Ikomityi enephepha lokuya ngasese
8 Ikhadibhodi kunye nomvundla wekhadibhodi
9 Ipirate enephepha lephepha langasese
10 Ikati yomgcini wepensile
11 Iikati ezenziwe ngeetyhubhu zekhadibhodi
12 Umthi wasentwasahlobo, kulula kwaye kulula ukwenza nabantwana
13 Inamba enekhadibhodi yokufaka iphepha langasese
14 Ibhere elimhlophe elinephepha langasese
15 Ikhadibhodi Roll Craft: Uyolo kwaye ulusizi
16 Iimpawu ezimnandi zekhadibhodi encinci
17 Imijukujelwa yendawo eneetyhubhu zekhadibhodi
18 Ubugcisa obunamaphepha asendlwini yangasese ukuze asebenze amanani
19 Funda ukufunda kunye nekhadibhodi esongwayo
20 Iityhubhu zekhadibhodi ezimile njengamaIndiya
Abantwana bathanda iimuvi ezibalaseleyo kunye nezinto zokudlala ezinxulumene nazo. Zipeyinte kwikhadibhodi ukuze wenze imifanekiso-ntetho Ngenye yezona zinto zilula kakhulu ezenza iphepha. Ngabo banokudlala okanye bahombise amagumbi abo!
Uya kufuna kuphela ipensile, isiphawuli, iibrashi kunye nepeyinti ye-acrylic. Ukuba ufuna ukubona ukuba zenziwa njani inyathelo ngenyathelo, ungaphoswa ngumyalezo Amagorha amakhulu enziwe ngekhadibhodi.
Kwakhona unokwenza ubugcisa ngemisonto yamaphepha kwinguqulelo yayo yenkosazana. Izinto oza kuzifuna ziyafana nobugcisa beqhawe, kodwa eyona nto ibalulekileyo yikhadibhodi apho abantwana banokuthulula kuyo yonke imisebenzi yabo.
Ukwenza ezi nkosazana zekhadibhodi entle ndicebisa ukuba ufunde iposti Amakhosazana ekhadibhodi apho uya kufumana zonke iinkcukacha zokwenza oonodoli bephepha.
Inqaba elula enephepha lephepha langasese
Yonke inkosazana ifuna inqaba apho iza kuhlala khona. Ukugqibezela ubugcisa bangaphambili, ndincoma ukuba wenze le nqaba yekhadibhodi. Enye yezona zinto zilula zenziwe ngephepha onokuzifumana, kodwa apho unganikezela khona ngochukumiso lwangempela ngokuziqhelanisa nokuthanda kwakho okanye komntwana. Kwakhona, kuthatha ixesha elincinane kakhulu ukwenza. Jonga eposini Inqaba elula enephepha lephepha langasese inkqubo ukusuka ekuqaleni kunye nezinto eziyimfuneko.
Unodoli wezinja okanye ezinye izilwanyana zokwenza nabantwana
Enye yezona zinto zonwabisa kakhulu zokwenza iphepha onokuzenza yile unodoli wenja nangona nje ukuba uthathe iqhinga unokwenza zonke izilwanyana ozifunayo. Vumela ukucinga kwakho kusebenze ngokungalawulekiyo kwaye ukwazi nokwenza eyakho ikhadibhodi yoonopopayi!
Ukubona yonke inyathelo ngenyathelo ungajonga kwiposti: Unodoli wezinja okanye ezinye izilwanyana zokwenza nabantwana.
Iibinoculars zokuzonwabisa ngakumbi
Abancinci bayakwazi ukubona umhlaba ngamehlo ahlukeneyo kwaye bafumane ulonwabo olukhulu naphina. Yintoni ebhetele kunokuba ubanike ii-binoculars zomlingo ukuze baphile iwaka lezinto ezintle ngelixa bedlala? Le yenye yezona zinto zilunge kakhulu ezenziweyo ezenziwa ekhaya kunye nabantwana nangaliphi na ixesha lasimahla. Yintoni egqithisile, Iya kubavumela ukuba badlale umdlalo kamva xa begqibile ukwenza.
Ungayibona indlela yokwenza kule khonkco ilandelayo: Iibinoculars ezinephepha lephepha langasese elinemiqolomba ngakumbi.
Enye yezona zinto zintle zamaphepha ezinto onokuzifundisa abantwana ukuba bazenze yile ndlovu intle yekhadibhodi. Inkqubo ilula kakhulu kwaye awuyi kufuna ukuthenga izinto ezininzi kwizinto zokubhala kuba inokwenziwa ngokugqibeleleyo ngezinto onazo ekhaya kwimizuzu embalwa. Jonga ukuba yenziwa njani inyathelo ngenyathelo kwisithuba Elephants.
Ngamanye amaxesha abantwana bayathanda ukudlala ikhitshi okanye umsitho weti. Ukuze badlale ngokubonelela ngokutya kwiindwendwe zabo ngaphandle kwengozi yokwenzakaliswa zezinye iintlobo zeempahla zasekhitshini, le imagi ilula yenye yezona zinto zibalaseleyo zokwenza iphepha onokuyenza kunye nabantwana.
Unokwenza iindebe ezininzi kunye neepleyiti njengoko ufuna. Nokuba undwendwe ngalunye okanye ilungu losapho banokuzihombisa ngokwabo ukuthanda kwabo ukwazi ukuba yintoni indebe nganye. Uya kuba nexesha elimnandi kakhulu! Ukuba ufuna ukwazi ukuba le ncwadana yenziwe njani kancinci kancinci, jonga iposti Ikomityi enephepha lokuya ngasese.
Obu bubugcisa obugqibeleleyo bokwenza ngeentsuku zePasika okanye ukudlala nje emva kwemini. Yenza le bunny entle Ayizukuthatha ixesha elide kwaye inokwenziwa ngezixhobo ezisisiseko njengoko kunjalo ngekhadibhodi kunye nekhadibhodi esongwayo yephepha langasese. Le yenye yezona zinto zilula zenziwe ngephepha. Ngaba uyafuna ukubona ukuba yenziwa njani? Cofa kwiposti Ikhadibhodi kunye nomvundla wekhadibhodi.
Ipirate enephepha lephepha langasese
Njengobugcisa obunamaphepha asele sele siwabonile amaqhawe, amakhosazana kunye nezilwanyana. IPirates ilahlekile! Ke kuya kufuneka usebenze ukuze wenze oonodoli abajoyina iihambo zabantwana.
Ukwenza amakhadibhodi ekhadibhodi Uya kudinga izinto ezimbalwa kwaye uninzi lwenkqubo lunokwenziwa ngabantwana bodwa. Njengakwimisebenzi yezandla zangaphambili, ezi pirates ziyindlela elungileyo yokuba abantwana baphuhlise iingcinga zabo xa kuyilwa abalinganiswa babo. Uyayibona yonke inkqubo kwisithuba Ipirate enephepha lephepha langasese.
Oku kulandelayo yenye yezinto ezenziwe ngamaphepha asebenza njengepensile kwaye yenziwe njengekati. Yinto yobugcisa ekhangeleka intle kakhulu kwidesika yabantwana kwaye yenziwe ngekhadibhodi ebuyiselweyo. Ukongeza, kulula kakhulu ukwenza kwaye awudingi zinto zininzi.
Kumanyathelo nje ambalwa uya kuba nekati yokubamba ipensile epholileyo kwaye izinto zokumakisha, iipensile kunye neekhrayoni azisayi kuphazanyiswa nakweyiphi na indlu kodwa ziyalelwe kwaye ngesandla uzisebenzise ngalo naliphi na ixesha. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngalo msebenzi wobugcisa, ungaphoswa sithuba Ikati yomgcini wepensile.
Olunye uhlobo olunemibalabala nolucace ngakumbi kunalolo ludlulileyo lolu Ikati ebambe ipensile ebengezelayo eneepompo ezinemibala. Uya kufumana kule posi onke amanyathelo: Iikati ezenziwe ngeetyhubhu zekhadibhodi.
Xa kufika intwasahlobo, umbono olungileyo kukwenza lo mthi mncinci kwiphepha leprepe. Le yenye yezona zinto zinobumba obusemagqabini bokuhombisa igumbi lamakhwenkwe ekuya kufuneka ukuba uthengele izinto ukuba awunazo ekhaya. Yonke into oyifunayo kobu bugcisa kunye namanyathelo okwenza uyakufumana kwisithuba Umthi wasentwasahlobo, kulula kwaye kulula ukwenza nabantwana.
Inamba enekhadibhodi yokufaka iphepha langasese
Unokwenza ubugcisa ngemiqingo yamaphepha ejongeka njengezidalwa ezintle ezinje ngeedragons. Ngolu bugcisa abantwana abancinci banokuba nexesha elimnandi lokuyilolonga kwaye emva koko badlale ngayo. Ukuba ufuna ukufumanisa ukuba ungayenza njani, ndincoma ukuba ucofe iposi Inamba enekhadibhodi yokufaka iphepha langasese apho yonke into ichazwa khona ngokweenkcukacha.
Ibhere elimhlophe elinephepha langasese
Kuzo zonke izinto ezenziwa ngephepha, Le yenye yezona zinto zilula kodwa ezingathandekiyo onokuzenza: ibhere le-polar. Abantwana baya kuba nexesha lokuzonwabisa ukuyila kwaye uya kuphinda uzisebenzise kwakhona izixhobo. Ngaba uyafuna ukwazi ukuba ufuna ntoni ukuze wakhe? Jonga iposti Ibhere elimhlophe elinephepha langasese.
Ikhadibhodi Roll Craft: Uyolo kwaye ulusizi
Obu bugcisa benzelwe ukuba abantwana abancinci baziqonde ngcono iimvakalelo kwaye baziveze kwikhadibhodi. Kulula kakhulu ukuyenza. Uzakufuna umqulu wekhadibhodi kuphela, isiphawuli kunye nezikere. Ukongeza kwiimvakalelo ezibuhlungu nezonwabileyo, unokwenza ezinye iimvakalelo ezinje ngokumangaliswa, uloyiko, isikizi ... Kule khonkco ilandelayo ungayibona inkqubo yokwenza: Ikhadibhodi Roll Craft: Uyolo kwaye ulusizi.
Iimpawu ezimnandi zekhadibhodi encinci
Okwangoku unokubona ukuba kukho iitoni zokwenza umqulu wephepha onokuthi uzenze. Le ikwimo yesithsaba esincinci ilungile ukubhiyozela imihla yokuzalwa, wenze iimpahla ekhaya okanye uyisebenzise kumdlalo. Amathuba angenamkhawulo!
Njengoko ikhadibhodi kufuneka isikwe, ukuba bazakuyenza bodwa, kuyacetyiswa ukuba abantwana babe nobuchule besikere kwaye ukuba akunjalo, umntu omdala kuya kufuneka ukuba abeke esweni ukuba bayilandele imiyalelo ngokuchanekileyo kwaye ibancede xa bayayidinga. Ukwenza esi sithsaba sekhadibhodi esimnandi uya kufumana onke amanyathelo kule post: Iimpawu ezimnandi zekhadibhodi encinci.
Le yenye yezinto ezenziwe ngephepha oya kuthi wonwabe ngakumbi xa usenza nabantwana. Ngeetyhubhu nje zekhadibhodi nje ezimbalwa kunye nedosi enkulu yoyilo, unokuphinda wenze ezinye iirokethi zesithuba esipholileyo.
Awuyi kufuna ngaphezulu kweetyhubhu zekhadibhodi ezenziwe ngokutsha, ezinye iikhadibhodi, iphepha lokuhombisa kunye nemibala emnandi. Le mveliso kulula kakhulu ukuyenza kwaye iya kusebenza njengeyona nto yokudlala nanjengento yokuhombisa indawo yabantwana. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ungaphoswa yile post Imijukujelwa yendawo eneetyhubhu zekhadibhodi.
Ubugcisa obunamaphepha asendlwini yangasese ukuze asebenze amanani
Enye yezinto ezenziwe ngephepha onokuthi uzenze ngumdlalo omnandi kunye neetyhubhu zekhadibhodi kunye neengqekembe, eziya kuthi zivumele abantwana ukuba bonwabe ngaphandle kokuchitha nayiphi na imali. Ilungile kule mihla yeemvula xa ungakwazi ukuphuma phandle. Ukubona imigaqo yomdlalo nendlela yokwenza, ndicebisa ukuba ujonge iposti Ubugcisa obunamaphepha asendlwini yangasese ukuze asebenze amanani.
Funda ukufunda kunye nekhadibhodi esongwayo
Lo mdlalo ulungele abantwana abafunda ukufunda kwaye ikwayenye yezona zinto zilula kunye neyona ncwadi ikhawulezayo yobugcisa bokwenza iphepha. Awudingi zixhobo kwaye sele sele unazo ekhaya. Kule khonkco ilandelayo uza kubona ukuba yenziwa njani kunye nemiyalelo yomdlalo: Funda ukufunda kunye nekhadibhodi esongwayo.
Iityhubhu zekhadibhodi ezimile njengamaIndiya
Ukuphelisa oku kudityaniswa kobugcisa ngemisongo yamaphepha sinala maIndiya amnandi kwaye anemibalabala eneentsiba. Zenziwe ngeetyhubhu zekhadibhodi ezenziwe zavuselelwa, iiribhoni ezinemibala, ipeyinti ...
Ukuba ufuna ukwazi ukuba uyile njani inyathelo elipholileyo lobugcisa ngenyathelo, ungaphoswa yile vidiyo iposti Iityhubhu zekhadibhodi ezimile njengamaIndiya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Imisebenzi yezandla » Imisebenzi yezandla kunye nezixhobo » Imisebenzi yeekhadibhodi » Imisebenzi yezandla enamaphepha aqengqelekayo
Ukupeyinta ikhadibhodi okanye ibhodi yomtshato ngokungathi ngumthi